Paste tomato mkpọ
Mpekere Tomato Sachet
Paste Tomato Drum
SUPER SEPTEMBER na-abịa- Nhọrọ kacha mma na ego kacha mma
Septemba na -anọchite anya oge owuwe ihe ubi, a na -ewepụta ihe ubi ọhụrụ nke tomato, anyị na -achọkwa iwebata nnukwu Septemba. Anyị ga -enye ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi nnukwu ego. Nabata ịkpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ! Tel/Whatsapp/Wechat: +86 158 3391 1611
Nabata na ime ụlọ anyị nke Canton Fair
Ọ dị otu izu kemgbe emepere ngosi ngosi Canton nke 129, ngwongwo anyị niile na -arụsi ọrụ ike na ịgbasa ozi. Ha niile bụ ọmarịcha ahịa ndị ọkachamara. Na mgbasa ozi dị ndụ, anyị ga -ewebata nkọwa ngwaahịa n'ụzọ zuru ezu. Ọ bụrụ na oge adịghị gị, ị nwekwara ike ilele vidiyo vidiyo. Ọ ...
2021 Gulfood na Dubai
Anyị gara Gulfood 2021, nabata ileta anyị n'afọ na -abịa! Oge: Feb. 21— 25, 2021 Adreesị: Dubai World Trade Center, PO Box 9292 Dubai, UAE
Kedu ihe dị iche na mado tomato na ketchup?
site na nchịkwa na 20-05-08
Paste Tomato Mgbe anyị na -eme ka tomato chara acha ghọọ ụtọ nke ukwuu na ịdị n'otu karịa, a na -akpọ ụdị a dị ka mado tomato. Anyị nwere ike iji mado tomato a na ụtọ dị iche iche yana usoro nri dị iche iche. Nke a na -enye ezigbo ụtọ na gumbos, ofe, stews, ite ite wdg wdg Tomato Ketchup The Essen ...
Mmemme ụlọ otu Hebei Tomato 2019
Hebei Tomato haziri nnukwu ọrụ ụlọ otu afọ site na Ọgọstụ 9 ruo 13, 2019. Iji mee ka ohere ndị ọrụ dị mma, belata nrụgide ọrụ, kwalite nkwukọrịta na nkwukọrịta n'etiti ndị ọrụ, mee ka njikọta otu na ike centripetal sie ike, ma hazie otu. unfo ...
Hebei Tomato Industry Co., Ltd. tọrọ ntọala kemgbe 2007 na Hebei, China, ngụkọta ego a na -etinye na ya bụ nde US $ 3.75, nke na -ahụ maka nhazi ụdị Paste Tomato mkpọ na Sachet Tomato Paste.
Sample mkpụrụ osisi efu